Akaụntụ CCNA Security - Ntuzi zuru ezu
Taa, ọnọdụ nzụlite na-agbanwe n'ezie. Ụdị dịgasị iche iche nke ihe ọhụrụ na-eweta nsogbu, dịka SDN na ígwé ojii nke na-agbanwe usoro netwọk ka a nụchaa n'ime afọ ole na ole gara aga. N'ọnọdụ ọ bụla, Cisco nọ na ebe kachasị elu nke egwuregwu netwọk maka ụfọdụ, ọtụtụ afọ. Ọ bụghị nanị na nke a na-emetụta ngbanwe ihu na ihu gị na nhazi usoro, ọzọ na ọkwa dị iche iche ma dị omimi dịka nyocha data na mgbakọ aka. 80% nke netwọk ụwa na Intanet na-agba ọsọ Cisco. Ọ na-adị mma mgbe nile site n'aka onye ọsụ ụzọ ụlọ ọrụ. Enwere ụfọdụ ihe mgbagha na-enweghị mgbagha n'ebe ahụ, ọ bụ ezie na CCNA Nchebe nọ na ihe kachasị elu nke egwuregwu ya (Ntuzi IT) ruo ogologo oge. N'agbanyegh i na o nweghi ike ime ka ikuku tinye aka na cisco bara uru, site n'ichegharia na CCNA, ị ga-arụrịrịrịrị ịmepụta nkwurịta okwu netwọk site na mmalite oge.
Nchịkọta Ntuziaka CCNA Security
Mbadamba usoro mmụta CCNA
Ihe gbasara mmasị CCNA
Cisco Certified Network Associate (CCNA) bụ ihe kachasị anya n'etiti ndị na-ahụkarị ma na-ahụkarị akwụkwọ IT nke taa. Ihe ndekọ ahụ na-egosi na e nyerela 1 nde CCNA nkwado dị ka nke ugbu a kemgbe 1998, mgbe mbụ o gosipụtara. CCNA abụghị naanị uru maka ndị ọrụ na ndị na-enyocha IT, yana ndị ọrụ. N'ụzọ doro anya, asambodo nchedo CCNA nwere nnukwu ihe mmasị. N'etiti ụzọ maka inweta asambodo a ọtụtụ ndị ọkachamara IT nwere agbanwe ndụ ha ma rụzuo uru ole na ole. Enweela ihe atụ ebe ndị ọkachamara IT nwere ọbụna mgbe ha na-arụ ọrụ ruo ogologo oge chere na ọ dị mkpa ịnakọta akwụkwọ CCNA.
Nlekọta nchedo CCNA na enyere aka n'inye data nyocha na ịrụ ọrụ iji mee ka ha nwee ike ịlele, nhazi, na nyochaa ihe ndị dị mkpa nke Cisco WLAN na obere azụmahịa (SMB) ma gbalịa ime ihe netwọk. Ọ na-enyere ndị nwere olileanya olileanya ịmepụta echiche na nsogbu ndị na-egosi njikọ LAN / WAN. A na-etinyekwa usoro iwu dị iche iche gụnyere IP, IGRP, nhazi ndepụta, CLAN, Ethernet, Serial, IP RIP, RIP, Nweta Access, na ihe ndị ọzọ na usoro a. Were ihe ọmụmụ ọ bụla, nke ga-akwadebe gị ịkwaga n'ọhịa. Eleghi anya ị nwere ike ịbanye ụlọ ọrụ na-azụkọtara ọtụtụ nde na ụlọ ọrụ 500 bara uru. Ọ bụ ụdị icheiche nke ga-ekewapụ gị na ọrụ IT.
Nchịkọta usoro ọzụzụ Cisco bụ ihe dị iche iche n'etiti ọrụ kachasị emetụta ụwa dum na nkume na-agba mbọ maka ndị ahụ nwere nzụlite Silicon Valley. Nkọwa ozi maka netwọk netwọk a n'etiti gị nso na ka ọrụ gị dị na ntanetị nye ihe ọhụụ a pụrụ ichepụta.
Ihe nchoputa CCNA bu akwukwo nkwado nke Cisco CCIE. Ịchọta akwụkwọ nchịkọta Cisco CCNA ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ ọrụ gị ma mezuo oge dị ukwuu. Ihe e dere n'okpuru bụ ole na ole n'ime ezigbo uru nke ịchọta CCNA Course, na -
Ị nwere ike ịtụ anya ịrịgo na ọrụ gị ma kwụọ ụgwọ na nzukọ gị dị ugbu a.
Ị nwere ike na-enweghị ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ọrụ nke na-achọ ịrị elu na ụgwọ.
A na-ahụ CCNA n'ebe niile n'ụwa nile, nke pụtara na ị nwere ike n'enweghi ike ịnweta ọnọdụ na mba ọzọ.
Nkwenye onwe onye dị ka CCNA bụ nchọpụta siri ike nke IT.
Usoro nyocha nke CCNA ga-eme ka o kwe omume maka ọrụ netwọk dị iche iche. Na agbanyeghị nke a, a ga-amarakwa ndị asọmpi na mpaghara nke Cisco si gbanwee na gbanwee. Ndị Cisco ejiri n'aka na ndị ọkachamara ga-enwe ike iduzi ma kpoo njikọ maka ebe dịpụrụ adịpụ nke na-agba ọsọ na WAN. A na-eme ka ha dị ọhụrụ site na ozi dị mkpa gbasara ihe nchebe netwọk, netwọk nke PC dịpụrụ adịpụ na ikike PC ọzọ.
Izucha akwụkwọ nke CCNA certification, ị ga-abụ onye ruru eru maka ọrụ dị iche iche. N'okpuru ederede bụ ọkwa profaịlụ gị nke ọma-
Njikọ Ịntanetị Njikọ
Onye nchịkwa Network
Otú ọ dị, uru ọzọ nke CCNA bụ bụ na njiri iru eru chọrọ bụ naanị ịga na 10 + 2. Site na ugbu a ruo iri na abụọ gafere ndị mmadụ nwere obi ọkụ zuru ezu maka ubi nke ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ na ịkparịta ụka n'Ịntanet nwere ike ịchọ CCNA n'enweghị ikike diploma. N'otu aka ahụ, a ga-eme ka atụmanya ọrụ nke olileanya ndị ahụ nwee ọganihu site na usoro ịgba akwụkwọ a. N'otu aka ahụ, CCNA bụ ikike dị mkpa achọrọ iji chọpụta usoro ihe nrịba ama nke Cisco tinyere CCIE. Ndị na-azụ ahịa na-achọ ka ịdebanye aha na LAN / WAN na-ebute usoro a nke ga-enyere ha aka maka ọganihu.
N'agbanyeghi ma ị bụ mmalite oge ma ọ bụ na-amalite ọrụ, ụlọ ọrụ netwọk enyela ógbè sara mbara maka ịrụ ọrụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọganihu ọhụrụ na-aga n'ihu, gụnyere ndị maka òtù na gọọmentị. Onye ọ bụla n'ime netwọk chọrọ ndị mmadụ ruru eru iji jikwaa arụmọrụ na nchekwa. Ọrụ ntanetị na-enwekwu ọbịbịa na ọzọ na CCNA kwenyero ga-enye gị mmezu na ekele maka ọrụ IT gị.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụbụ onye na-ebu ụzọ nweta ọzụzụ nke IT maka òtù dị elu. Ọ na-agwa ndị ọkachamara ka ha wee nwee usoro mmepụta ihe na netwọk na ọkwa dị iche iche. Ha na-enye ọzụzụ dị oke mma na CCNA maka ụlọ ọrụ.
Nchịkọta CCNP - Nduzi zuru ezu
Ihe dị ọhụrụ na Cisco si Data Center - CCNA Data Center